HomeKit iri kuzochinja neIOS 11 uye kuti ive nani (zvirinani kwazvo) | IPhone nhau
HomeKit iri kuzochinja neIOS 11 uye kuti ive nani (zvirinani kwazvo)
HomeKit iri zvishoma nezvishoma kuwana pasi munyika yeimba otomatiki, asi yaive iine mamwe mapoinzi ekuvandudza kuitira kuti ibudirire kukura kunodiwa kuti ive chimwe chinhu mukati mekusvikwa nechero ani. Apple yakazofunga kuzviita uye kusvika kwe iOS 11 ichabatanidza nhevedzano yeshanduko iyo ichabatsira chikuva kupedzisira kusimuka.
Kugarisana pamwe nezvimwe zvishongedzo senge mafafita uye matepi, zvitsva zvinodiwa kuratidza zvishandiso, kunatsiridza kubatana neepasi latency uye nekukurumidza kubatana, yakapusa kumisikidza, zvimwe zvingangoita otomatiki ... iyo rondedzero yeshanduko yakakura uye isu tichava tsanangudza pazasi.
1 Simpler uye isingadhuri chitupa
2 Kunyangwe akareruka uye nekukurumidza setup
3 Zvitsva zvitsva
4 Chitsva chiitiko chinokonzeresa
5 AirPlay 2 rutsigiro
6 Nhau dzakanaka dzeKeKKKit
Simpler uye isingadhuri chitupa
Kugadzirisa zvigadzirwa zvine chitupa chekuenderana kweKeKKiti raisave basa rakareruka, zvaireva kuti pakupedzisira tanga tichitaura nezve zvigadzirwa nemutengo wakakwira kupfuura zvimwe izvo zvaisaenderana. Apple yaida kuti vashandise yavo chip inovimbisa kuchengetedzeka uye kuenderana kwechigadzirwa, asi izvo hazvizombove zvakadaro zvakare. Kubva ikozvino zvichienda chitupa chichaitwa kuburikidza nesoftware, uye kuti pamusoro pekudzikisa mutengo wezvishandiso zvinobvumidza vazhinji vagadziri kupinda muchikamu ichi uye kuti zvigadzirwa zvisingawirirane parizvino zvinogona kuburikidza nesoftware yekuvandudza.
Izvi hazvizokanganisa chengetedzo nekuti software ichave yakasimbiswa neApple pachayo, inoenderera ichida yakazara yakazara data encryption uye yakanyanya kuchengetedzeka kupa iyo "Inoenderana neKeKKit" chitaridzi. Raspberry Pi uye Arduino based HomeKit zvishandiso? Zvino zvichave zvinogoneka. Izvo zvakare zvichawedzera marabhoritari ekuyedza ane nzvimbo muChina neUnited Kingdom, izvo zvichawedzerwa kune avo vatove muUnited States.
Kunyangwe akareruka uye nekukurumidza setup
Maitiro ekumisikidza mudziyo unowirirana neKeKKit waive wakananga, asi nerutsigiro rutsva rwemakodhi eQR neNFC zvichave nyore Uye zvakare, hazvizove zvakakosha kuti mudziyo ubatidzwe, chimwe chinhu icho chave kukosha. Uya ne kamera ye iPhone yako kuQR kodhi inounza chishandiso cheKeKKit uye maitiro ekumisikidza anotanga otomatiki. Vaya vagadziri vanosanganisira machipisi eNFC enzira iyi vanozokwanisa kuishandisa zvakare izvozvi Appel yavhura Chip yayo yeNFC kune vamwe mapato.
Rondedzero yezvikamu zveKeKeKit yakareba, asi ikozvino mamwe maviri akawedzerwa: anosasa uye matepi. Iye zvino kumba otomatiki inosvika mubindu uye Tinogona kudzora kudiridza kwehuswa hwedu nemiti kubva ku iPhone yedu, kuimisa kana tikaona kuti iri kunaya kana kuimisikidza iri kure kubva kunzvimbo yedu yezororo kana kupisa kupisa kuchirova. Rondedzero izere yezvikamu zvinotevera:
Chitsva chiitiko chinokonzeresa
Iye zvino michina ichaenda kumberi pamwe nesarudzo nyowani iyo iOS 11 inotipa, senge mukana wekumisikidza chiitiko kana mumwe munhu achisvika kumba. Hapana chikonzero chemafambiro ekufamba asingakwanise kusarura pakati pevanhu, kana makamera ekuongorora epamberi anozivisa kumeso, nekuti kana iwe ukatakura yako iOS chishandiso uye kupinda mumba, iyo yakagadzirirwa configation ichavhurwa.
Zvekushandisa zvinogona kukonzereswa kana uchibva pamba, kana kunyangwe kana munhu wese abva pamba nekuda kwe "Mushandisi wekupedzisira asiya nzvimbo" sarudzo. Zviripachena iyi sarudzo ine painogumira, uye ndiko kuti padiki daro kwainogona kushanda i100m, saka kana ukapfuura padyo nepamba zvichaita sekunge iwe unopinda. Kuti uwane zvakanyanya kunyatsoita, iwe uchafanirwa kuramba uchishandisa chaiwo madivayiri kuti uone huvepo hwako.
AirPlay 2 rutsigiro
Apple yakaratidza AirPlay 2 paWWDC, uye nekuwedzera pakutsigira multiroom kuti ikwanise kuteerera mimhanzi imwechete mumakamuri akati wandei, inoenderanawo neKeKKit, kuitira kuti masipika anoenderana neichi chitsva chitsva agone kupinda otomatiki system iko Kumba kunyorera. Kwete HomePod yeApple chete inoenderana neAirPlay 2, vagadziri vakuru vakatosimbisa kuti mamwe emamodheru avo anoenderana. neiyo yapfuura AirPlay ichave inoenderana neAirPlay 2 kuburikidza neye firmware yekuvandudza.
Nhau dzakanaka dzeKeKKKit
Muchidimbu, zvizhinji zvezvikumbiro zvakakumbirwa nevashandisi zvakazadziswa nezviziviso zveApple. Kuva nezvishandiso izvo zviri nyore kugadzira uye kusimbisa zvinoreva kuti mamwe mabhenji achasarudza sisitimu ino, vamwe vanozogona kugadzirisa zvigadzirwa zvavo zviripo kuti zvienderane neKeKKit kuburikidza neyakareruka gadziriso. Uye pakupedzisira izvi zvinoreva izvozvo pachave nekuwaniswa kwakawanda uye mitengo inodonha, kumwe kwekukwanisa kukuru kudzora imba yako nhasi. Zvimwe otomatiki sarudzo, mapfupi ekupindura nguva, uye zvimwe zvakasiyana muzvishongedzo kupedzisa yakanaka yeKeKit kusimudzira. Chinhu chega chiripo ndechekuti HomeKit inosvika kuMac uye kuti tine sarudzo dzakachipa pane Apple TV kana iyo iPad yekuita senzvimbo yekudzora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » HomeKit iri kuzochinja neIOS 11 uye kuti ive nani (zvirinani kwazvo)
Nhau dzakanaka, asi ini handizive kana dzizokwana. Iyo tekinoroji kunze kweHomekit iri kuenda inononoka, kunonoka, zvekuti yaive imwe yekutanga uye nekuti kuwedzera kwayo kunonoka, yakadya pasi uye Amazon yakatora Alexa yayo mumakore maviri chete. Tim Cook akavimbisa gore rapfuura pa wwwc muna Chikumi 2016 pamusoro pezana homekit accessories zvinouya munguva pfupi, uye kwete chete havana kusvika nekukurumidza, asi isu tichakamirira. Kune rimwe divi, Amazon inonyatso fambira mberi nekukurumidza uye yakavhurika kune vechitatu mapato ini ndinofunga kuti kumba otomatiki kwakakosha kwazvo. Apple haina kuvhura Siri kune vechitatu mapato kune chaiwo zvinhu. Uye ikozvino mibvunzo inosara mumugodhi weinki ine homekit:
1. Ko nezve homekit yeMac? Zvekuti riini desktop application?
2.Multiroom ichashanda nenzvimbo here? Rega nditsanangure: Ini ndinogona kuisa rwiyo rweBeatles muLa Cocina uye rimwe na bon Javi mudziva, kana ndinofanira kunge ndine rwiyo rwakafanana ruchiridza kwese kwese sezvinoitika ne chomescast inoenderana asi rwiyo rumwe chete, haugone kuisa mimhanzi yakasiyana panzvimbo yega yega yeimba. Uye iri rimwe rematambudziko andinoona mune homekit, chii chinoitika kuti Apple haina kuziva kuti mhuri dzinogara mudzimba uye ivo havasi ivo chete-munhu? Ndiri kureva, kunyange imbwa inofanirwa kunge iine iPhone? Hapana munhu mumhuri anogona kuve neanodhi, ivo vanofanirwa kuburitsa kunyorera pane mamwe mapuratifomu sezvavakaita neApple Music.
3. Ko nezve chikamu chemidziyo yemumba: michina yekuwachisa, yakaoma, ovhoni, nezvimwe. Zvekare, makwikwi ane makore ezvakanaka.
4. Zvakadii neakaundi-mushandisi account. Ini ndinodzokorora, mhuri dzinogara mudzimba uye kazhinji imwe neimwe iine nyaya dzakasiyana, saka dzinofanirwa kunge dzisina kuvharwa nehurongwa hwavo. Kana ndikaudza imba yekumba, rangarira izvi mangwana kana kufonera Maria, achaziva izwi rangu orinyora pasi mudhayari rangu kana mhuri yese inoziva nezvehurongwa hwangu?
5. Uye zvino inguva yeSpain. Kana homekit ichinonoka, muSpain yatove inotsamwisa. Kunze kwekuvhenekera, uye akati wandei makamera uye thermostat pane zvishoma zvimwe zvaunogona kutenga. Ndeipi inoenderana nemhepo inogadzirisa yaunogona kutenga? Hapana. Ndeipi roller roller shutter? Hapana, ndeupi musuo wegaraji? Hapana, ndeipi kukiya? Hapana, ndeipi bhero? Hapana.
Izvo zvinotaurwa kana kuti vanonyatsomuka kana kunonoka pavanenge vachidaro, nekuti kana vanhu vapedza mari zhinji pa "gadget" inoenderana semuenzaniso ne Alexa havazochinjira kuna Siri vorasa zvese zvishandiso zvakatengwa.
Apple ine nguva kusvikira Alexa neGoogle Imba vadzidze Spanish, saka ikozvino unoziva. Ndaizoverenga isingasviki gore. Saka iwe unoona, asi kwandiri hondo iyi ichave yekutanga iwe yawakarasikirwa nenguva yakareba, uye ihondo mune mari yakawanda iri panjodzi. Asi zvakataurwa kusiyana nedzimwe nguva, apo vanhu vakapedza mafuro kune mamwe "mageja" anoenderana neAkiel kana Google Imba nekuda kwekushayikwa kwekugona mumusha, saka havasi kuzovarasa kuti vabvumirane neimba. Steve basa angadai asina kupotsa musika uyu uye angadai akaona zvandiri kutaura nezvazvo
iOS 11 ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti utaure zvakananga nemakambani
Tsvaga zvese zvinoitika zvakakukomberedza neiyo nyowani Instagram Nyaya nenzvimbo